Nhau - Yakabudirira R&D | Foregene 'SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method)' hapana kudikanwa kwekucheneswa kweiconic, zvinongotora maminetsi makumi mana!
Yakabudirira R&D | Foregene 'SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method)' hapana kudikanwa kwekucheneswa kweiconic, zvinongotora maminetsi makumi mana!
Foregene- 'SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Probe Nzira)‘
Kubva kutanga kwekuputika, Foregene akanyatsoitarisa, uye panguva imwechete nekukurumidza akaronga masainzi ekutsvagisa mauto, uye akaisa mari kekutanga mukutsvaga pamwe nekuvandudza kweye nyowani coronavirus nucleic acid yekutsvaga kit, zvichibva pamakore akaunganidzwa kunaya kwehunyanzvi uye ruzivo, kuwedzera iyo SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Probe Nzira) panguva yekutanga.
Iyo kititi inotora iyo patent tekinoroji yeForegene's Direct PCR (yakananga PCR), iyo inobvisa kudiwa kweiyo nucleic acid kunatswa kwemuenzaniso. Mushure mekureruka nucleic acid kuburitsa kurapwa, inogona kuwedzerwa kune mhinduro mhinduro yekuonekwa kwemuchina. Kuvhiya kwacho kuri nyore uye nekukurumidza, kunongotora maminetsi makumi mana kusvika makumi matanhatu kuti uwane miedzo makumi mapfumbamwe nematanhatu, izvo zvinodzikisira mutoro wevashandi. Mamiriro ekushandisa anoshanduka. Rudzi rumwe chete rwe fluorescent huwandu hwePCR chiridzwa chinodiwa kuti chipe chinobudirira kwazvo mutongo wekudzivirira nekudzivirira.
Zvakanakira zvakananga PCR zvichienzaniswa neyechinyakare PCR
Pamusoro pehutachiona pneumonia, bhakitiriya pneumonia zvakare chirwere chinotapukira chisingakwanise kufuratirwa.
Mukurapa kwehutachiona hwehutachiona, chinetso chikuru chakatarisana navanachiremba vechimbichimbi ndechekuti havagone kuwana pathogenic dhata munguva pfupi. Kusara kwemibairo yekuongorora kunoita kuti vanachiremba vatsvage rubatsiro kubva kumaabhakitiriya akasiyanasiyana (anogona kukanganisa mabhakitiriya akasiyana siyana), mishonga inorwisa mabhakitiriya ichasimudzira kugadzirwa kwemabhakitiriya asingadziviri mishonga.
Mukutarisana nechinetso ichi chinoshanda, Foregene yakagadzira nzira yekufema yepasigen yekuona kit (multiplex fluorescent PCR nzira).
Iyo kitambo zvakare haidi nucleic acid kucheneswa kwemasampuli evarwere. Inoshandisa musanganiswa wePCR yakananga uye multiplex PCR kuona Streptococcus pneumoniae, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, uye kupindwa muropa nefuruwenza mu sputum kana bronchial lavage fluid munenge awa rimwe chete. Bhakitiriya eropa uye zvimwe gumi neshanu zvakajairika zvekiriniki zvakajairika zvekufema turakiti utachiona zvinogona kunyatso kusiyaniswa pakati zvakajairika mabhakitiriya uye pathogenic mabhakitiriya. Isu tinotenda zvinotarisirwa kuve chishandiso chinoshanda kubatsira varapi mukushandisa chaiko kwemishonga.
Seimwe yemakambani epamba mumunda wekuongorora mamorekuru, pakatarisana nedenda iri, vashandi veR & D nevashandi vezvigadzirwa veFoegene vakapa nguva yekusanganazve nemhuri dzavo panguva yeZororo reMutambo. Ivo vakaungana pamwechete, vakanamatira pamatanda avo, uye vakashanda nguva yekuwedzera. Kuedza kusingaperi kwakaitwa kusimudzira kudzivirira uye kudzora denda iri.
Panguva yakakosha zvikuru yedenda, takabatana kukunda matambudziko, uye tinoda kupa zvakakwana reagent dziviriro kuvashandi vemberi vekurapa kuti vakunde "denda rehondo" iri pamwe nenyika nevanhu!
Post nguva: Jan-29-2020